I-China Mount Box Abavelisi kunye nabaXhasi - i-Chaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeCopper > Ibhokisi yeNtaba
Ibhokisi yeNtaba eyenziwe e-China inokuthengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
Cat5e iNtaba yeBhokisi 2 Port RJ45
I-Cat5e yeBhokisi yeNtaba 2 Port RJ45: Olu hlobo lwebhokisi yeNtaba lunokwenziwa nge-1 port kunye ne-2ports. Sibonelela ngebhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye elingundoqo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. , Iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
ICat6 Mount Box 2 Port RJ45
I-Cat6 Mount Box 2 Port RJ45: Olu hlobo lwebhokisi yeNtaba lunokwenziwa nge-1 port kunye ne-2ports. Sibonelela ngebhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye elingundoqo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. , Iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
ICat6A yeBhokisi yeBhokisi 2 ePort RJ45
ICat6A yeBhokisi yeNtaba 2 iPort RJ45: Olu hlobo lwebhokisi yeNtaba lunokwenziwa ngezibuko elinye kunye neendawo ezimbini zokudlala. Sibonelela ngebhokisi yentaba, i-faceplate, i-jack yelitye elingundoqo, ibhloko ye-wiring, ulawulo lwentambo, ikati.5e, ikati. 6 kunye nekati. , Iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
Cat5e iNtaba yeBhokisi 1 Port RJ45
Le Cat5e Mount Box 1 Port RJ45 ine-RJ45 jack uqobo, akukho sidingo sokuhlanganisa i-jack yelitye eliyintloko, eyenza ukuba kube lula ukuba isetyenziswe. Izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zinolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
ICat6 Mount Box 1 Port RJ45
Le Cat6 Mount Box 1 Port RJ45 ine-RJ45 jack uqobo, akukho sidingo sokudibanisa i-jack yelitye eliyintloko, eyenza ukuba kube lula ukuba isetyenziswe. Izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zinolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
ICat6A iNtaba yeBhokisi 1 ePort RJ45
Le Cat6A Mount Box 1 Port RJ45 ine-RJ45 jack uqobo, akukho sidingo sokudibanisa i-jack yelitye elingumthi, eyenza ukuba kube lula ukuba isetyenziswe. Izinto ezikumgangatho ophezulu kwaye zinolwakhiwo olulungileyo, olwenza ukuba lube nezatifikethi ze-UL / RoHS / CE.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Ibhokisi yeNtaba abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Ibhokisi yeNtaba eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.